Zvokuimba Seal Factory | China Mechanical Seal Vagadziri, Vatengesi
Zvinoenderana neDIN24960 / LIK uye GB6556, compact dhizaini, yakasarudzika mhete dhizaini, kuitira kuti chisimbiso chiine kudzvinyirira kwakanaka, kupisa kwemafuta, kuratidza kuti deformation yemugumo kumeso pasi pekumanikidzwa kukuru kuti ideredze, inogona kuitwawo musangano mhando.
Indasitiri yekushandisa: muhombe mugodhi michina, kureva: centrifugal pombi,
Kushandiswa kwepakati:inoshandiswa kuisa chisimbiso nekuchenesa kana ine zvimwe zvikukutu zvepakati nepakati zvakaderera saizi, senge mafuta, inopisa uye inotonhora mvura, makemikari mbishi zvigadzirwa, mafuta anodyiwa, zvinwiwa, nezvimwewo, sarudza zvinhu zvisingaite ngura, zvinogona kushandiswa kune imwe yakasimba mamiriro. Iyi modhi yezvigadzirwa zvinotorwa kubva kuC8B, C8UV, C8BV, C8BKC uye nezvimwe zvakateedzana zvezvigadzirwa, zvichiteerana kune akasiyana mamiriro ekushanda.
Yakanaka ngura kuramba, ina yakaenzana zvikamu zvinomisa mhete, muripo chinhu, anobatsira chisimbiso uye yekuisa chisimbiso mhete, zvinoenderana neDIN24960 uye GB6556 zviyero. Inokodzera mapombi epentrifugal uye mamwe ma rotary shaft michina inoenderana neDIN24960 uye GB6556 zviyero.
Zvinoshanda maindasitiri: oiri kushandiswa uye kutakurwa, mvura kurapwa indasitiri, kemikari nemakemikari internet indasitiri.
C89 akateedzana michini ndeyaakatorwa akateedzana eC8 akateedzana, zvinoenderana neDIN24960 / LIK uye GB6556 / LIK saizi, compact chimiro. Iyo yese inotenderera yekupedzisira kumeso yakapetwa neiyo yakazara graphite static mhete kubvisa simba rekupisa tembiricha uye kuwana yakaderera leakage emesi.
C89 yakateedzana chisimbiso mhando yakagadzirirwa yakakwira viscosity yemafuta yepakati, inoshandiswa mukuzora mafuta, mafuta efriji, turbine mafuta uye imwe svikiro remafuta.
Yakakosha rinorema basa chisimbiso che slurry kumisikidza, ngura kuramba, abrasion kuramba
Maindasitiri anoshanda: simba remagetsi, kuchera, kugadzira ore
Typical mafomu: flue gasi desulfurization kurapwa, tailings kurapwa, marasha slurry zvekufambisa, bauxite uye simbi slurry, etc
Mhando dziripo CF28, CF29 imwechete yekupedzisira kumeso isina kubereka,
CF28L, CF29L chete magumo inobereka
CF28D, CF29D kaviri kumagumo kumeso pasina kubereka
CF28DL, CF29DL chete magumo inobereka
Yakajairwa: DIN29138 uye DIN28154, yakasanganiswa yakaoma gasi chisimbiso.
Chinangwa: Yakakwira magumo dhiraivha musanganisi.
Pakati: akasiyana makemikari. MuCF29, chete fomu yekubatanidza yekunze mhango zvikamu zvakasiyana neiyo iri muCF28. Izvo zvakasara zvechimiro uye saizi yekubatanidza zvakangofanana neCF28.
Multi-chitubu chekunze chisimbwa chisimbiso, imwe chete magumo anotenderera mhando, saizi yekumisikidza zvinoenderana neANSI uye DIN maitiro pombi zviyero, zvinoenderana neEuropean neAmerican inch system standard chisimbiso dzakateedzana, inofamba mhete kumagumo kumeso optimization dhizaini, inovimbika simba, kugadzikana, yakafara huwandu hwezvinhu. Inokodzera simba remagetsi, simbi, kurapwa kwemvura, indasitiri yemakemikari uye mimwe minda.